Clean ID – Mineral Bronzer SPF 020 | CATRICE COSMETICS
Clean ID – Mineral Bronzer SPF 020
ကန့်မှုန့် မပါဝင်သော Bronzer ဖြစ်ပါတယ်။
Sun-kissed အသားအရေ ပုံစံ။
နေလောင်ဒဏ်ကာကွယ်ပေးမဲ့ SPF 15 ပါဝင်ပါတယ်။
သငျ့အသားအရမှော နရေဲ့ အနမျးတဈပှငျ့ကို တှရေ့သလို လှပနစေမှောနျော ! ဒီ talc-freeဘရှနျဇာလေးက တနျဖိုးရှိတဲ့ သဘာဝတှငျးထှကျ အရှကျတှကေနေ ရရှိတာကွောငျ့ ကတီပါသားလေးလို နူးညံ့တဲ့အထိအတှကေို့ ပေးစှမျးနိုငျတယျ။တကူးတက နလေောငျခံထားသလို ရှရေောငျဝငျးဝါနတေဲ့အသားအရောငျကိုလညျးပေးစှမျးနိုငျပါတယျ။ နပေူဒဏျကိုလညျး ဂရုစိုကျစရာမလိုဘူးနျော .. ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဒါလေးက Catriceရဲ့ ပထမဆုံးနလေောငျဒဏျခံနိုငျတဲ့ SPF 15ပါဝငျတဲ့ ဘရှနျဇာပေါငျဒါလေးဖွဈလို့ပေါ့ .. ။
သင့်အသားအရေမှာ နေရဲ့ အနမ်းတစ်ပွင့်ကို တွေ့ရသလို လှပနေစေမှာနော် ! ဒီ talc-freeဘရွန်ဇာလေးက တန်ဖိုးရှိတဲ့ သဘာဝတွင်းထွက် အရွက်တွေကနေ ရရှိတာကြောင့် ကတီပါသားလေးလို နူးညံ့တဲ့အထိအတွေ့ကို ပေးစွမ်းနိုင်တယ်။တကူးတက နေလောင်ခံထားသလို ရွှေရောင်ဝင်းဝါနေတဲ့အသားအရောင်ကိုလည်းပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ နေပူဒဏ်ကိုလည်း ဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးနော် .. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒါလေးက Catriceရဲ့ ပထမဆုံးနေလောင်ဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ SPF 15ပါဝင်တဲ့ ဘရွန်ဇာပေါင်ဒါလေးဖြစ်လို့ပေါ့ .. ။
MICA, TITANIUM DIOXIDE, KAOLIN, MAGNESIUM STEARATE, ALUMINA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX, ISOCETYL STEAROYL STEARATE, JOJOBA ESTERS, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, PUNICA GRANATUM FRUIT EXTRACT, ENANTIA CHLORANTHA BARK EXTRACT, GLYCERYL CAPRYLATE, PENTYLENE GLYCOL, GLYCERIN, MAGNOLIA OFFICINALIS BARK EXTRACT, BUTYLENE GLYCOL, AQUA (WATER), HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS (ALGAE) EXTRACT, MAGNESIUM OXIDE, OLEANOLIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SORBIC ACID, CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES).
Matt bronzing powder infused with minerals and UV Protection SPF 15.